परम्परा र आधुनिकता को सामंजस्य (१) परम्परा! गीशा, काबुकी, सेन्टो, इजाकाया, किंत्सुगी, जापानी तरवारहरू ... - Best of Japan
जिओन क्योटो = शटरस्टकमा माईको गीशाको चित्र
जापान मा, धेरै परम्परागत पुरानो चीजहरु बाँकी छ। उदाहरण को लागी, तिनीहरू मन्दिर र मन्दिरहरू हुन्। वा तिनीहरू सुमो, केन्डो, जुडो, कराटे जस्ता प्रतियोगिताहरू हुन्। शहरहरूमा सार्वजनिक स्नान र पबहरू जस्तो अनौंठो सुविधाहरू छन्। थप रूपमा, त्यहाँ जीवन शैलीमा विभिन्न परम्परागत नियमहरू छन्। यो जापानी मानिसहरुको परम्पराको सम्मान गर्न को एक प्रमुख विशेषता हो। यस पृष्ठमा, म ती परम्परागतको एक हिस्सा प्रस्तुत गर्दछु।
जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईंले ती फोटोहरू दृश्यहरू तीर्थ स्थानहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, टोकियो मा मेजी Jingu तीर्थ मा, हामी कहिलेकाँही यी जापानी शैली को दुलही देख्न। हालसालै, पश्चिमी शैलीको दुलही बढ्दै छ। यद्यपि जापानी शैलीको विवाहको लोकप्रियता अझै बलियो छ। निम्नका लागि निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्:
परम्परागत जापानी संस्कृति
परम्परागत जापानी जीवन
एक जापानी गीशाले क्योटो = शटरस्टकमा मन्दिरमा सार्वजनिक कार्यक्रमको लागि प्रदर्शन गर्दछ
गीशा एक महिला हुन् जसले जापानी नृत्य र जापानी गीतहरूको भोजमा पाहुनाहरूलाई अतिथि गरी। आधुनिक जापानमा लगभग अब अवस्थित छैन, तर अझै क्योटोमा।
क्योटोमा, गेशालाई "Geiko" भनिन्छ।
त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले गेशालाई गलत अर्थ लगाउँछिन् महिला आफैलाई बेच्दै। गीशा त्यस प्रकारका महिलाहरू भन्दा बिलकुलै फरक छन्। यसको विपरित, गीशाले जापानी नृत्यको अतिरिक्त विभिन्न संस्कृतिहरू पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। तिनीहरू उन्नत शिक्षाको साथ धनी अतिथिहरूको मनोरंजन गर्न सक्छन्।
"माईको" क्योटोमा एउटी युवतीको तालिम गरी, जिइकोमा लक्ष्य गर्दै। तिनीहरू Gion मा छन्। यदि तपाईं जिओनको परम्परागत सडकमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं सुन्दर किमोनोहरूसँग हिंड्नेहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
Geiko को प्रदर्शन मा हरेक वर्ष अप्रिल माथिको भिडियो जस्तै आयोजित गरीन्छ। तपाईं त्यहाँ एक अद्भुत चरणको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
काबुकी एक शास्त्रीय जापानी नृत्य नाटक हो जुन १th औं शताब्दीको सुरूदेखि जारी रहन्छ। काबुकी सिर्जना गर्ने व्यक्ति "Okuni" नामको एक प्रसिद्ध महिला हुन्। सुरुमा त्यहाँ महिला कलाकारहरु पनि थिए। काबुकी यस युगको एक प्रतिनिधि पप संस्कृति थिए।
यद्यपि, त्यस पछि, महिला कलाकारहरुलाई अश्लील प्रदर्शन मन नपराउने सरकारी आदेश द्वारा निर्वासित गरियो। यस कारणले, १th औं शताब्दीको मध्यदेखि, काबुकी नृत्य नाटक भयो जुन केवल पुरुषहरूले मात्र खेल्छन्। त्यस्ता प्रतिबन्धहरूको बीचमा, कलाकारहरूले अनौंठो सुन्दर दृश्यहरू निर्माण गरे र सिर्जना गरे।
प्रसिद्ध काबुकी लेखक तोशिरो कवाटाकेले आफ्नो पुस्तक "काबुकी: बारोक फ्यूजन अफ आर्ट्स" मा वर्णन गरे, "नोह पुरातन ग्रीक नाटक जस्तै शास्त्रीय हो, जबकि काबुकी शेरोपियरसँग मिल्दोजुल्दो बारोक हो।"
मैले यसभन्दा पहिले धेरै चोटि माउन्ट कावाटेकेलाई अन्तर्वार्ता लिएँ। त्यतिन्जेल म काबुकीमा राम्रो थिएन। किनकि मलाई थाहा थिएन कि कलाकारहरू मञ्चमा के कुरा गर्दैछन्। यद्यपि माउण्ट कवाटाकेबाट सल्लाह पाएपछि मैले सम्पूर्ण चरणको सौन्दर्यको आनन्द लिने निर्णय गरें। त्यसोभए मैले काबुकीलाई धेरै रमाइलो गरें।
तपाईं किन जापानी बारोक डान्स नाटकको आनन्द लिनुहुन्न?
काबुकी मुख्यतया टोकियो, ओसाका र क्योटोमा आयोजित छ।
सुमो एक कुश्ती प्रतियोगिता हो जुन जापानमा स्वतन्त्र रूपमा विकसित भयो। ठूला सुमो पहलवानहरू निर्धारित सर्कल भित्र एक अर्कासँग टकराउँछन्। सुमो रेसलरले कि त विपक्षीलाई सर्कलबाट बाहिर धकेल्दै वा उसलाई मैदानमा ल्याएर जित्छन्।
सुमो प्रायः आधुनिक समयको खेल प्रतियोगिता मध्ये एक मानिन्छ। तर सुमो वास्तवमा शिन्टोमा आधारित परम्परागत घटना हो। विगतमा, मन्दिरहरूको उत्सवमा सुमो आयोजित गरिन्थ्यो र देवताहरूलाई समर्पण गरिन्थ्यो। यदि तपाईं प्रान्तमा पुरानो मन्दिरमा जानुहुन्छ भने तपाईंले मन्दिरमा सुमो ठाउँहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
अहिले पनि, सुमो पहलवानहरूले शिन्टोमा आधारित विभिन्न रीतिथितिहरू प्रदर्शन गर्दछन्। सुमो पहलवानहरू केवल शक्तिशाली हुनु आवश्यक छैन, तर राम्रो शिष्टाचार पनि राख्न आवश्यक छ।
जापानीहरूले लामो समयदेखि ड्रम प्रयोग गरेका छन्। हामीले तीर्थयात्रा र काबुकी र अन्य चरणहरूमा धेरै ड्रम प्रयोग गरेका छौं। जापानी ड्रम तपाईको दिमागमा प्रतिध्वनित हुनेछ र तपाईको भावनाहरुलाई कडा पार्नेछ। म पहिले क्यान्डो (जापानी फेन्सिंग) खेल्थें। केन्डोमा पनि, हामीले अभ्यास गर्न सुरु गर्नु अघि ड्रमहरू ट्याप गर्ने रीतिथितिहरू गर्‍यौं, र जब हामी अभ्यास समाप्त गर्छौं हामीले ड्रमलाई पनि पिट्दछौं।
२० औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि, यी जापानी ड्रम प्रदर्शनहरू गम्भीरतापूर्वक प्रदर्शन गर्ने कलाकार समूहहरू देखा परे र विदेशमा कन्सर्टहरू गर्न थाले। यदि तिनीहरू तपाइँको देशमा आउँछन्, कृपया गएर हेर्नुहोस्।
यहाँबाट, म जापानी जनताको जीवनमा जरा गाडेको परम्परागत चीजहरूको परिचय दिनेछु। सबैभन्दा पहिले, म जापानमा आएको बेला शहर वरिपरि हिंड्दा तपाइँले सामना गर्नु पर्ने कुराको वर्णन गर्छु।
जापानका शहरहरूमा परम्परागत चीजहरू
सेन्टो एक जापानी शैली सार्वजनिक स्नान हो। त्यहाँ तातो स्प्रि .्गहरू छन्, तर धेरै सेन्टोले तातो पानी उमालेका छन्। त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ यसको एक्जस्टको लागि चिमनी स्थापना गरिएको छ। यो चिमनी सेन्टोको प्रतीक जस्तो छ।
पुरातन समयमा, भनिन्छ कि मन्दिर र मन्दिरहरूले गरिबहरूका लागि सार्वजनिक स्नान स्थापना गरे। इडो अवधिमा (१th औं शताब्दी - १ th औं शताब्दी), एडो (टोकियो) मा आगो रोक्नको लागि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बाहेक अन्य परिवारमा नुहाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यस कारणले धेरै सेन्टो जन्मिए।
नुहाउने काम सर्वसाधारणहरूका लागि रमाईलो थियो। केहि ठूलो सेन्टोमा, रकुगो, परम्परागत जापानी कथाकारहरू, बजाइएको थियो। इडो युगमा सेन्टो पुरुष र महिला बिभाजित थिएन, सँगै प्रवेश गर्नु सामान्य कुरा हो।
हालसालै, धेरैजसो घरमा नुहाउने ठाउँ भएकोले सेन्टो प्रयोग गर्ने व्यक्तिको स conside्ख्यामा खासै कमी आएको छ। यद्यपि केहि सेन्टोले अझै काम गरीरहेको छ। यस बाहेक, ठूला नुहाउने सुविधाहरू (सुपर सेन्टो) जुन प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न प्रकारको स्नानको आनन्द लिन सक्दछन् र देखा परेका छन् लोकप्रियता।
तल टोकियोमा लोकप्रिय सुपर सेन्टो छ। यसका अतिरिक्त अन्य धेरै सुपर सेन्टो छन्। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, जापानमा आउनु भन्दा पहिले तिनीहरुको जाँच गर्नुहोस्।
>> Oedo Onsen Monogatari को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
इजाकाया एक जापानी शैली पब हो। इजाकायामा मुख्यतया शोचु, बियरमा बिभिन्न मादक पेय पदार्थहरू दिइन्छ। खानाको मेनू विविध छ।
इजाकाया इडो अवधिमा विकसित भएको थियो (१ 17 औं शताब्दीदेखि १ th औं शताब्दीसम्म), र त्यसबेलादेखि यो त्यो ठाउँ थियो जहाँ मान्छेहरू भेला भएका र मात भएका थिए। यद्यपि आधुनिक समयमा, महिला सहित विविध व्यक्तिहरू यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। रक्सी र महिलाको लागि लोकप्रिय प्रकार को खाना पनि तैयार छन्।
धेरै इजाकाया आकर्षक छन् किनकि उनीहरू रेष्टुरेन्टहरू, लक्जरी होटेल पबहरू र यस्तै भन्दा सस्तो छन्। खाना पनि पर्याप्त छ।
हालसालै, विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले पनि इजाकाया धेरै प्रयोग गर्छन्। यो जापानी मानिसहरुको वातावरण को आनन्द लिन को लागी एक लोकप्रिय कारण हो।
जापानी मानिसहरुको जीवनमा परम्परागत चीजहरु
टाटामी फर्निचर सामग्री हो जुन जापानी घरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। परम्परागत जापानी घरहरूमा, धेरै कोठा थुप्रै आयताकार टाटामी म्याटले भरिएका हुन्छन्। टाटामी मैटको सतहमा असंख्य संख्यामा बोटहरू रश (रश) भनिन्छ।
मलाई लाग्छ कि कहिले काहिँ तपाईलाई जापानी घर जानुहुँदा टाटामी म्याटहरूको कोठामा आमन्त्रित गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृपया टाटामी मैटमा सुत्न प्रयास गर्नुहोस्। सायद तपाई धेरै सहज महसुस गर्नुहुन्छ। चिसो जापानमा, टाटामी चटाई एकदम सहज छ।
यो धेरै पहिले भएको थिएन कि जापानी घरहरूमा टाटामी म्याटहरू फैलिन थाले। पहिले जापानमा धेरै घरहरूमा काठका बोर्डहरू राखिएको थियो। टाटामी चटाई केवल त्यस ठाउँमा राखिएको थियो जहाँ विशेषाधिकार वर्गको व्यक्ति बस्दछ। इडो अवधिमा (१ 17 औं शताब्दीदेखि १ th औं शताब्दीसम्म), धेरै टाटामी मैटहरू फैलिए तर किसानहरू आदिमा भने पृथ्वी वा रूखको भुइँ स्पष्ट छ।
हालसालै जापानमा पश्चिमी शैलीको घरको संख्या बढेको छ र कोठामा टाटामी म्याट राख्ने घरहरूको स smaller्ख्या झन् झन् सानो हुँदै गइरहेको छ। जहाँसम्म, मन्दिर र र्योकन (जापानी शैलीको होटल) मा, मलाई लाग्छ कि तपाईं टाटामी मैटहरू फेरि र फेरि देख्नुहुनेछ। कृपया शिल्पकारहरू द्वारा बनाइएको सुन्दर टाटामी म्याट छुने प्रयास गर्नुहोस्।
परम्परागत जापानी घरहरूमा, "फुसुमा" कोठा र कोठाहरू छुट्याउन प्रयोग गरिन्थ्यो। Fusuma काठको फ्रेमको दुबै छेउमा कागज वा कपडा पेस्ट गरेर बनाईन्छ। कोठामा र बाहिर जाँदा हामी फुसुमालाई छेउछाउमा स्लाइड गर्दछौं।
Fusuma केवल कागज वा कपडा पेस्ट गरिरहेको छ, ताकि तपाईं सजिलैसँग यसलाई तोड्न सक्नुहुन्छ। जब म बच्चा थिएँ, म कोठामा खेलिरहेको थिएँ, फसुमालाई लात हान्दै र यसलाई तोडेर, मलाई हजुरआमाले गाली गरे। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै जापानीहरु छन् जसको समान सम्झनाहरु छन्।
Fusuma थोरै ध्वनि इन्सुलेशन भएकोले, पहिलेको जापानी मानिसहरूले अर्को कोठामा मानिसहरूले के गरिरहेका छन् सजिलै सुनेका थिए। पहिले, म इडो अवधि (१ 17 औं शताब्दीदेखि १ thौं शताब्दीसम्म) सञ्चालन गरिएको जापानी शैलीको होटलमा एक्लै बसें। त्यसबेला सम्म पनि मैले अर्को कोठामा भएका सबै आवाजहरू सुनें। व्यक्तिगत रूपमा म यस प्रकारको कुरामा राम्रो छैन।
जब तपाईं कुनै ठूलो मन्दिरमा जानुहुन्छ, तपाईं सतहमा सुन्दर चित्रहरू सहित फुसुमा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो देखिन्छ कि पुरानो धनी मानिसहरूले प्रत्येक फुसुमाको चित्रको आनन्द लिए। यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि त्यहाँ Fusuma नजिक कुनै हिंस्रक बच्चाहरु थिए।
शुजी फसुमासँग मिल्दोजुल्दो छ। जे होस्, शोजी प्राय: कोरीडोरबाट कोठा विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ जहाँ बाह्य प्रकाश प्रवेश गर्दछ। शोजी काठको फ्रेममा जापानी कागज पेस्ट गरेर बनाइएको हो। जापानी कागज यति पातलो छ, बाहिर प्रकाश थोरै हुन्छ। शोजी प्रयोग गरेर, जापानी कोठा सूर्यको प्रकाशले भरियो र उज्यालो भयो। शुजीले थोरै बत्तीको कवच राख्छ, त्यसैले कोठामा एक मजबूत बत्ती थिएन, तर एउटा कोमल प्रकाश राखियो।
मैले एक अमेरिकी समाजविद्को सिद्धान्त सुनेको छु जसले भन्छन "शोजीको अवरोधले जापानी क्यारियर महिलाहरुलाई रोकिरहेको छ।" जसरी महिला पदोन्नती भए पनि पुरुष शोजीको पछाडि व्यवसाय गर्दैछन्। महिला Shoji को पछाडि जान कहिल्यै सक्षम छन्। महिला निश्चित रूपमा shoji मार्फत पुरुषहरूको छाया देख्न सक्छन्, तर तिनीहरू निर्णय लिन मा भाग लिन सक्दैनन्। मलाई लाग्यो कि यो एक रमाईलो सिद्धान्त हो। शुजी पातलो छ, तर यसको उपस्थिति ठूलो छ।
"जापानी भुईमामा सुत्छन, ओछ्यानमा छैन।" कहिलेकाँही म विदेशबाट यस्तो आवाज सुन्छु। यो गल्ती होईन, तर यो सहि छैन। जापानीहरूले टाटामी तल्लामा फ्यूटन राखे। र त्यो Futon मा सुत्न।
Futon दुई प्रकारका छन्। एउटा फ्युटन टाटामीमा फैलिएको छ। हामी यस मा निहित हुनेछ। अर्को हामी माथि Futon छ। यो Futon नरम र तातो छ।
यदि तपाईं र्योकन (जापानी शैलीको होटल) मा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं Futon सँग सुत्न सक्नुहुन्छ। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
जापानी घरमा, हामी ओछ्यान राख्दैनौं र Futon लाई साँझ मात्र राख्छौं। यस तरिकाबाट, हामी दिनको समयमा विभिन्न उद्देश्यका लागि ठूलो कोठा प्रयोग गर्न सक्दछौं। यदि हामी दिनको समयमा फुटन सुकायौं भने, हामी आर्द्रता पनि रोक्न सक्छौं। Futon धेरै उपयोगी छ।
यद्यपि, हालका वर्षहरूमा धेरै जापानीहरू फ्युटनको सट्टा ओछ्यानमा सुतिरहेका छन्। किनकि टाटामी कोठा कम हुँदैछ।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई फुटन मन पर्छ। म अझै पनि फुटनलाई टाटामीको कोठामा सुतेर आराम गरीरहेकी छु!
परम्परागत जापानी टेक्नोलोजी अझै पनी विरासतमा आएको छ
जापानमा विभिन्न परम्परागत प्रविधि छन्। ती मध्ये, एउटा जुन मैले विशेष रूपमा परिचय दिन चाहान्छु त्यो हो किन्त्सुगी भनिने टेक्नोलोजी।
कित्सुगीको टेक्नोलोजीको साथ, हामी टुक्राइनहरूमा सामेल हुन सक्दछौं र सिरेमिक बिच्छेद भए पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूका मूल आकारमा फर्काउन सक्छौं।
यो प्रविधि लामो समयको लागि कुशल कारीगरहरूद्वारा हस्तान्तरण गरिएको छ। शिल्पकारहरूले एकसाथ टुक्राहरू जोड्न लाह प्रयोग गर्छन्। लाह एक प्रकारको झोला हो र चिपकने काम गर्दछ। अर्को, तिनीहरू जोडिएको भागमा सुनको पाउडर लागू गर्दछन्। विवरणका लागि माथिको भिडियो हेर्नुहोस्।
किंत्सुगीलाई किंत्सुनागी पनि भनिन्छ। के यो प्रविधि पछाडि जापानी चिया समारोह को भावना हो। चिया समारोहमा, हामी चीजहरू त्यस्तै रूपमा लिन्छौं। यदि यसले क्र्याक गर्छ भने, हामी टुक्रिएको दृश्यको आनन्द लिन्छौं।
आधुनिक मानिसहरु लाई तुरुन्तै तुरुन्तै फ्याँकियो यदि केहि बिच्छेद भयो। यस्तो आधुनिक समयमा, किंत्सुगीले हामीलाई अर्को सुन्दर जीवन शैली बताउँदछन्।
दुर्भाग्यवस, तपाइँ सजिलैसँग किन्त्सुगी उत्पादनहरू किन्न सक्नुहुन्न। Kitsugi एक चीज तपाईं एक शिल्पकर्मीलाई गर्न को लागी एक चीज हो जब तपाईंको मनपर्ने शिक्षणअप ब्रेक हुन्छ। जहाँसम्म, क्योटोमा "होटल कान्रा क्योटो" को पहिलो तल्लामा, शिल्पकारहरूले "kitsugi स्टूडियो RIUM" सञ्चालन गर्छन्। विवरणका लागि निम्न साइटमा हेर्नुहोस्। शीर्ष पृष्ठबाट "लाउन्ज र शप" को पृष्ठमा जानुहोस्, तपाईं किंत्सुगी भेट्नुहुनेछ!
>> होटल कान्रा क्योटोको आधिकारिक साइट यहाँ छ
टाटारा र जापानी तरवारहरू
अन्तमा, म जापानी तरवार सम्बन्धित परम्परागत प्रविधि परिचय गर्न चाहन्छु।
सबै जापानी तरवारहरू विशेष फलामले बनेका हुन्छन्। फलाम माथिको चलचित्रमा प्रस्तुत पारम्परिक इस्पात निर्माण विधि "Tatara" द्वारा उत्पादन गरिएको हो।
यो इस्पात निर्माण प्रत्येक वर्ष जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म पश्चिमी होन्शुको पर्वतीय क्षेत्र ओकुजुमोमा मात्र गरिन्छ। यो कुशल कारीगरहरू द्वारा जारी छ। शिल्पकारहरूले विस्कोसिटीको साथ ठूलो भट्टी बनाउँछन्। त्यहाँ फलामको बालुवा राख्नुहोस् र चारकोलको साथ तुलनात्मक रूपमा कम तापक्रममा यसलाई तताउनुहोस्। यस तरीकाले अत्यन्त शुद्ध फलामको उत्पादन हुन्छ।
चार दिन र रातमा एक पटक फलामको उत्पादन हुन्छ। शिल्पकारहरूले भगवानलाई पहिले प्रार्थना गर्दछन्, त्यसपछि, सुत्नु बिना लगभग आगो समायोजन गर्न जारी राख्छन्। तिनीहरूले अन्ततः भट्टी भत्काउँछन् र बाहिर प्रवाहित तातो फलाम बाहिर निकाल्छन्।
म एक पटक दृश्यमा आएको छु। फेब्रुअरीमा बिहान5बजेको थियो। हिउँ परिरहेको थियो। भट्टीमा ज्वालाले छोडिदियो मानौं यो एक अजि was्गर हो जब कारीगरहरूले हावामा प्रवेश गरे। म तातो गर्मी को कारण जलाइएको थियो। शिल्पकर्मीहरू चार दिनको लागि घटनास्थलमा आगोको विरूद्ध झगडा गर्छन्। तिनीहरूसँग डरलाग्दो मानसिक शक्ति र शारीरिक बल छ। जब मैले पछि त्यसको मितिमा अन्तर्वार्ता लिएँ, उनीहरूको अनुहार बल्दा रातो थियो।
ओकुजुमो एक सुन्दर र रहस्यमय पर्वतीय गाउँ हो जुन जापानी मिथकको चरण बन्न गयो जस्तो प्रसिद्ध "यमाता नो ओरोची कथा" हो।
दुर्भाग्यवस, यो इस्पात निर्माण सार्वजनिक लागि खुला छैन। किनभने फलाम उत्पादन गर्नु पनि एक पवित्र समारोह हो। यद्यपि ओकुजुमोमा यस इस्पात निर्माणलाई परिचय दिन एउटा विशेष संग्रहालय "तातारा र तरवार स muse्ग्रहालय" छ। यस स muse्ग्रहालयमा माथिको चलचित्रमा परिचय दिएझैं जापानी तरवारहरूको प्रदर्शन पनि भइरहेको छ।
हाल, जापानी तरवारहरु सबै Okuzumo को "Tatara" द्वारा उत्पादित फलाम प्रयोग गर्दछ। किनकि आधुनिक कारखानामा उत्पादन गरिएको फलामले तीखो र कडा तरवार चलाउन सक्दैन। यो "तातारा" एक सार्वजनिक लाभ फाउन्डेशन द्वारा संचालित हो जुन जापानी तरवार उत्पादन टेक्नोलोजी संरक्षण गर्दछ। यो नींवको टोकियोमा जापानी तरवार संग्रहालय पनि छ। यदि तपाईं वास्तवमै जापानी तरवार हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म टोकियोको नेशनल म्यूजियम वा यस फाउन्डेशनले सञ्चालित निम्न संग्रहालयमा जान सिफारिस गर्दछु।
>> आधिकारिक Okuizumo यात्रा गाइड यहाँ छ
>> जापानी तलवार संग्रहालयको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
"जीवन र संस्कृति" मा फर्कनुहोस्